Bahamas, Garaaca Wadnaha ee Dalxiiska ayaa u Dabaal daga Maalinta Dalxiiska Adduunka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » News » Bahamas, Garaaca Wadnaha ee Dalxiiska ayaa u Dabaal daga Maalinta Dalxiiska Adduunka
Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wararka Dowladda • News • Dadka • War-Saxaafadeed • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
R / wasaare ku xigeenka, Mudane I. Chester Cooper, Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga iyo Duulista Hawada.
Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas, Ra'iisul Wasaare Ku -Xigeenka, Mudane I. Chester Cooper ayaa xusaya sannad -guuradii 41aad ee Maalinta Dalxiiska Adduunka,
Jasiiradaha Bahamas waxay ku biiraan Ururka Dalxiiska Adduunka ee Qaramada Midoobay iyo Ururka Dalxiiska Kariibiyaanka si loo aqoonsado saamaynta baaxadda leh ee dalxiisku ku leeyahay shakhsiyaad aan tiro lahayn oo adduunka ku baahsan.
“Sannadkan, Maalinta Dalxiiska Adduunka ayaa loo asteeyey inay noqoto maalin xoogga la saaro kobcinta loo dhan yahay iyada oo loo marayo dalxiiska, taas oo ah mid aad u xasaasi ah,” ayuu yiri Ra’isul -wasaare Ku -xigeenka The mudane I. Chester Cooper, Wasiirka Dalxiiska, Maalgashiga & Duulista Hawada ee Bahamas.
“Sida meelo badan oo Caribbean -ka ah, dalxiisku waa garaaca wadnaha Bahamas oo sida aan nidhaahno, waa shaqsi kasta.
Xeebahayagu waa kuwo neef leh, biyuhuna aad bay u cad yihiin waxaad ka arki kartaa meel bannaan, laakiin taasi ma aha waxa na qeexa.
Halkii, waa shaqsi kasta oo qaabeeya waaya -aragnimada Bahamas una taagan inuu ka faa'iidaysto guusha dalxiiska. Waxaa iga go’an inaan shaqooyin iyo fursado u abuuro dhammaan Bahamiyiinta iyo inaan ka caawiyo qarankeenna weyn inuu bogsado. ”
Maaddaama xannibaadaha socdaalka ee caalamiga ah ay bilaabayaan in la fududeeyo, oo ay sabab u tahay kororka helitaanka tallaalka, Bahamas waxay ku habboon tahay soo-kabashada joogtada ah. Kor u kaca duulimaadyada jadwalka ee la socda soo noqoshada wershadaha dalxiiska ayaa gacan ka geysaneysa koror wanaagsan oo tirooyinka booqdaha, taasoo keentay ku dhawaad ​​500,000 oo booqde lixda bilood ee ugu horreeya sannadka.
"In kasta oo aan la kulannay dagaal aad u sarreeya xilliyadan aan hore loo arag, waa inaan diirada saarnaa oo aan rajo wanaagsan qabnaa maadaama adduunku bilaabmayo inuu dib u furmo," ayuu yiri Ra'iisul Wasaare ku -xigeenka.
“Waxaan ku biirayaa hoggaamiyeyaasha Kariibiyaanka oo dhan si aan sare ugu qaado muhiimadda ka -mid -noqoshada bulshada, joogtaynta, iyo meelaha caqliga leh iyo meheradaha. Dalkeenna quruxda badan, iyo gobolka aan jecel nahay ee Kariibiyaanka, ayaa mar kale barwaaqoobi doona oo sii wadi doona horumarka, sida erayada hal -ku -dhigga Bahamas: Hore, Sare, Hore, Wadajir. ”
KU SAABSAN BAHAMASKA
Baadh dhammaan jasiiradaha waa inay ku bixiyaan www.bahamas.com